Archdiocese of Mandalay blog: December 2009
ငါတို့၌ ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း ငါတို့ တောင်းပန် ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော် မူသော ဘုရားသခင် - (ဧဖက် ၃း၂၀)
သူငယ်ချင်းရေ ဒီလာမဲ့ ခရစ္စမတ်ကို "မင်း" နဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုချင်လို့ "မင်း"ဆီ"တို့ စာရေးလိုက်တယ်။ "သူငယ်ချင်း"လို့ ဆိုတာထက် တို့တတွေဟာ "ကရင်"နဲ့ "ချင်း"ဖြစ်ကြပေမဲ့ "မောင်နှမ"တွေလို ခင်မင်လာခဲ့ကြတာ... ဘာပဲပြောပြော တို့တစ်တွေဟာ ခရစ်တော်၌ "ညီအစ်ကိုမောင်နှမ" တွေပဲပေါ့ ။
"မင်း"ကို "တို့" ဘာပြောခဲ့လဲ မှတ်မိလား။ မင်းရဲ့ခံစားချက်၊ စုံစမ်း နှောက်ယှက်ခြင်း ပြဿနာတွေကို ကြားရတာ ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်အကြောင်း ပြန်ကြားရသလိုပဲ။ အချိန်နဲ့ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း ပုံစံ၊ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာဟာ အခက်အခဲ ပြဿနာပေါင်း "သောင်းခြောက်ထောင်" မက တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုး ရလေအောင် လူတိုင်းဆီကို ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရောက်လာတတ်တာ သဘာဝပဲ။ အာဒံနဲ့ဧ၀တို့ ကြုံရသလိုပဲလို့ ပြောရမလား။ အဲဒီ "စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း အခက်အခဲ" တွေကို တို့တွေ "ဘယ်လို" ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလဲ၊ "ဘယ်သူ့"ကို အား ကိုးပြီး ဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမူတွေ၊ အမူအကျင့်တွေ၊ ဘ၀တွေပြောင်းလဲသွားရတာပဲပေါ့။
တို့ညီမ အငယ်ဆုံးအသက် (၂၀)ကျော် အရွယ်ကောင်းလေး အသည်းအသန်ဖြစ်တုံးက တို့လေ ညီမလေးကို ဘုရား သခင်ပြန်မခေါ်ဖို့ ဆေးရုံပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဒူးထောက်မျက်ရည်ကျပြီး ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ တွေ့သမျှ ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်၊ မယ်တော့်တမန်အဖွဲ့ အို... တို့ တွေ့သမျှ လူအားလုံးကိုလည်း ညီမလေး အတွက်ပဲ ဆုတောင်းခိုင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို တို့နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။
သူများ မိသားစုတွေကို တို့က ဆုတောင်းပေး၊ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကျတော့ မနှစ်သိမ့်နိုင်၊ အလိုတော်ကို မနာယူနိုင်ခဲ့ဘူး။ တို့အရမ်းကြေကွဲ ခံစားရတယ်။ တို့ဘာလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာလဲ မရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့တို့ ဘုရားတျောင်းလဲ မှန်မှန်မတက်၊ ဘုရားလဲ မှန်မှန်မရှစ်ခိုးဘဲ တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေထုတ်၊ မကျေမနပ်နဲ့ တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ (၁) နှစ်ကျော် တို့ခံစားမှုတွေမဲ့၊ ယုံကြည်ချင်းတွေ ပေါ့လျော့၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိ၊ မငြိမ်မသက်နဲ့ တစ်ခုခု လိုနေတယ်လို့ ခံစားလာရတယ်။ ဘာလိုနေမှန်းလဲ မသိ၊ ဘာမှလဲမလိုချင်၊ လိုလဲလိုနေတယ်လို့ ဟာတာတာနဲ့ ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့လာတယ်။
ဒါနဲ့ တို့...စိန်မိုက်ကယ်ဘုရားကျောင်း အဲဒီတုန်းက ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဖာသာရ်ဂြိုလ်တုဆီသွားပြီး တို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ခံစားချက်တွေကို သွားပြောပြခဲ့တယ်။ ဘုန်းဘုန်းက ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတော့ "ဘုန်းကြီးကို ပြောပြခဲ့သလို... ကိုယ့် စိတ်ခံစားချက် အရှိကိုအရှိတိုင်း ဘုရားသခင်ကိုလဲ ပြောပြလိုက်ပါ"တဲ့။ တို့လဲ... ဟိုး... ငယ်စဉ်ကတည်းက အိပ်ယာဝင်၊ အိပ်ယာထ ဆုတောင်းနေကြ အကျင့်ရှိတော့ "ဘုရားသခင် ကျမ ဘုရားလည်း မရှိခိုးချင်ဘူး၊ ဆုလဲ မတောင်းချင်ဘူး၊ ဘာမှလဲလိုချင်တာ မရှိတော့ဘူး။ အလိုချင်ဆုံး ညီမကိုမှ ကိုယ်တော်မပေးဘဲ၊ ကိုယ်တော် ကျမကို အပြစ်ပေးချင်လဲပေး၊ လုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်၊ ကိုယ်တော့်သဘောပဲ။ ကျမလဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး" လို့ စိတ်ထဲကနေပြောရင်း အိပ်ခဲ့တဲ့ ညတွေ များခဲ့တယ်။
စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း အခက်အခဲတွေဆိုတာ ဒီတစ်ယောက်ဆီမှာတော့ အရမ်းများနေပြီ သူ့ဆီ ထပ်မသွားတော့ဘူးလို့မှ မရှိတာ။ ဒါကြောင့်လည်း တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပြဿနာအကြီးအကျယ်နဲ့ မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှု ဒုက္ခခက်ခဲတွေ အစုံလိုက် တို့ဆီထပ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ပထမတော့ လူတွေကို အားကိုးပြီး တို့အခက်အခဲတွေကို အဖြေရှာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည် ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဗေဒင်လက္ခဏာမေး၊ ခဏတော့ စိတ်ပြေသလိုဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ကုန်၊ ပိုက်ဆံကုန်၊ အအိပ်အစား မမှန်နဲ့ ကြာလာတော့ တို့ကို ဘယ်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေမှ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘူး။
(ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ထွက်ပေါက်တွေဆီ ခေါ်သွားမဲ့ လူတွေနဲ့ မတွေ့ခဲ့တာ ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ ကာကွယ်မှု ဆိုတာ တို့နောက်မှ သိခဲ့ရတယ်)။
တကယ်တော့ တို့ရဲ့ပြဿနာ ဒုက္ခတွေကို ဘယ်သူမှ ကိုယ်စား ခံမပေးနိုင်ဘူး။ မျှဝေ ခံစားပေးတယ်ဆို တာလဲ ခဏပဲ။ လူတွေဆီက ငွေနဲ့ပစ္စည်း တစ်ချို့ကို ရနိုင်ပေမဲ့ ထပ်ထူညီမျှခံစားပေးမှု၊ အချိန်နဲ့ မေတ္တာကတော့ အလွန့်အလွန် ရှားပါးကာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
တို့ရဲ့ ပြဿနာက "တို့နဲ့ထပ်တူညီ ခံစားပေးနိုင်တဲ့သူ၊ တို့အတွက် အချိန်အမြဲ ပေးနိုင်တဲ့သူ၊ တို့ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုး မေတ္တာမပျက် သည်းခံ ချစ်နိုင်တဲ့သူ ဘယ်မှာရှိမလဲ၊" တို့ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။
ဒါနဲ့တို့ရဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ ကျမ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကြိုးစားလုပ်ပြီးပြီ၊ ကျမ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။ ကိုယ်တော်မတတ်နိုင်တာ မရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်တော့်သဘောဘဲလို့ ဘုရားသခင်ထံ ပုံအပ် လက်နက်ချ အညံ့ခံလိုက်ပြီးမှဘဲ... တို့ တဖြည်းဖြည်း ငြိမ်သက်ခြင်းတွေ ရလာတယ်။ ဒါနဲ့ (၂)နှစ် ကျော်ကြာလာတဲ့ခါ တို့ဘ၀နောက်ကြောင်းကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အံ့သြစရာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။
တို့ ဒီလောက်ဆိုးမိုက်နေတာတောင် ဘုရားသခင်ကတို့ကို ပေးခဲ့တဲ့၊ ပေးနေတဲ့ ကောင်းချီးတွေက ရေတွက်လို့မကုန် အောင်ရှိနေတယ်။ ဥပမာ- ဆူနာမီထဲမှာ တို့မပါဘူး။ ၀န်ထမ်းလျော့တဲ့ထဲ မှာမပါဘူး။ ဘတ်(စ်)ကား မှောက်တဲ့ထဲမှာ မပါဘူး။ တို့အတွက် နေဖို့၊ စားဖို့၊ လုံလောက်တဲ့ လစာငွေ၊ မန္တလေးမှာ မိဘနဲ့ခွဲပြီး အလုပ် လာလုပ်ရပေမဲ့ တို့ကို ဂရုစိုက်မဲ့ ဦးလေး၊ အဒေါ်၊ အစ်မတွေ၊ တို့အတွက် အမြဲဆုတောင်း ပေးနေတဲ့ မိဘနှစ်ပါး၊ မောင်နှမတွေ၊ တူ တူမလေးတွေ... အို... ပြောမယ်ဆို မကုန်နိုင်ဘူး။
သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကို သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် တို့မတောင်းဘဲနဲ့၊ တို့တောင် သတိမထားမိခဲ့တဲ့ သူပြင်ဆင် ပေးထားတဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေ၊ တို့သူ့ကို ဘယ်လောက်ပြစ်ထား ပြစ်ထား၊ ဘယ်လောက် စိတ်နာအောင်လုပ် လုပ်၊ ဘုရား ကျောင်းမတက်၊ ဘုရားမရှိခိုးလဲ သူက ၀မ်းနည်းစွာ ခွင့်လွှတ် ချစ်နေတုန်းပဲ။ တို့နဲ့ မထိုက်တန်ဘဲနဲ့ကို တို့ လိုချင်တာတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေ အံ့သြလောက်အောင် ပေးနေတာ တို့သိလိုက်ရတယ်။ တို့ လိုချင်တဲ့အဖြေ သီအိုရီကို တို့ ရှာတွေ့ပြီ။ အဖြေကတော့ အနန္တမေတ္တာနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ တို့ကမ္ဘာ လောကကြီးရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ပဲပေါ့။
မင်းလိုချင်တာနဲ့ သူပေးတာ တစ်ထပ်တည်း ကျမနေသေးပေမဲ့ "မင်း"သိ ထားဖို့က သူပေးနေတဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေက တို့နဲ့ မင်းတို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု၊ ကြိုးစားမှု၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ မထိုက်တန်ဘဲနဲ့ကို သူရဲ့ ကောင်းချီး၊ ကျေးဇူးတော်တွေဟာ မင်းလိုချင်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့ အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ "မင်း"လဲ တစ်နေ့သိလာလိမ့်မယ်။
ယုံကြည်ခြင်း မရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့အထိ နာကျဉ်းမှု၊ စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရပါစေ။ ဘုရားသခင်က မင်းကို တစ်နေ့ သူ့ဆီနောင်တနဲ့ ပြန်လှည့်လာအောင် ယုံကြည်ခြင်း ကြိုးမျှင်သေးသေးလေး ချန်ထားတယ်ဆိုတာ တို့ဘ၀နဲ့ အတွေ့ကြုံနဲ့ရင်းပြီး ယုံကြည်နေတယ်။ မင်းလဲ ဒီသီအိုရီကို သုံးပြီး မင်းရဲ့ ဘ၀အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့တို့ မျှော်လင့်သလို သူလဲ မျှော်လင့်နေမယ်ဆိုတာ တို့ယုံတယ်။ တို့ကိုသူ ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ ခရစ္စမတ်က သက်သေဘဲပေါ့။ တို့ကို ချစ်လွန်းလို့ တို့တစ်တွေ ဒီအတိုင်း ဆက်အသက်ရှင်နေရင် ထာဝရ ငရဲထဲကျမှာစိုးလို့၊ တို့ရဲ့ ထာဝရပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမှာစိုးလ၊ို့ နှမျောလို့၊ တို့တွေ အချိန်မှီ နောင်တရပြီး သူ့ဆီပြန်လာဖို့ သူနဲ့အမြဲပျော်ရွှင်ဖို့၊ အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ မေတ္တာတွေနဲ့ သူကြိုဆိုနေရုံသာမကဘူး တို့နဲ့အတူ ထပ်တူခံစားဖို့၊ အချိန်ပေးဖို့၊ မေတ္တာပေးဖို့၊ တို့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖို့ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို တို့ မတောင်းဘဲနဲ့တို့ လောက အပြစ်သားတွေဆီကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်။
ကဲ... အဲဒီလောက်တောင် အံ့သြဘွယ်ကျေးဇူးတော၊် မေတ္တာတော၊် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ ဒီခရစ္စမတ်မှာ နှလုံးသားတံခါးတွေကို ဖွင့်ပြီး မင်းနဲ့တို့ ခရစ်တော်ကို အတူပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုရအောင်နော်။
ငါတို့၌ ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့ တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန် ထူးခြားစွာပြုခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင် (ဧဖက် ၃း၂၀)။
White Rose (Anisakan)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 1:51 AM
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 1:45 AM
သခင်ယေဇူး ကောင်းကင်ဘုံကို တက်ကြွသွားပြီးနောက် အမိအသင်းတော်ဟာ နှစ်ပေါင်း (၃၀၀)ကြာအောင် ရောမ ဘုရင်မင်းဆက် (၁၀)ဆက်ရဲ့ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ရောမအင်ပါယာရဲ့ ဘုရင်ကိုမကိုးကွယ်ဘဲ သခင်ယေဇူးကိုသာ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးကွယ် ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို ဓမ္မအာဇာနည်တွေ အဖြစ်ပွဲနေ့တွေ အသီးသီးသတ်မှတ်ပြီး ကြည်ညိုဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သွေးမြေမကျသော်လည်း သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ ဘ၀နဲ့နေပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာမပါတဲ့ ရဟန္တာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူ မသိသူမသိ ကျင့်ကြံ နေထိုင်သွားကြတဲ့ သူတော်စင်တွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ရာ အေဒီ ၆၀၉-ခုနှစ်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး စတုတ္ထမြောက် ဘော်နီဖေ့စ် ([ope Moniface IX) ကနေ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ကို "ရဟန္တာအပေါင်းပွဲနေ့" အဖြစ်သတ်မှတ် ကျင်းပစေခဲ့ပါတယ်။ "ရဟန္တာပေါင်းပွဲ"ကို ကျင်းပတာဟာ "သူတော်သူမြတ် အပေါင်းတို့သည်တလုံး တ၀တည်းဖြစ်၍ အချင်းချင်းအကျိုး ကုသိုလ်တို့ကို ခံစားရကြောင်း" ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ခြင်း အချုပ်ရဲ့ န၀မအပုဒ်ကို ၀န်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမိအသင်းတော်က ဒီပွဲနေ့ကို ရည်ရွယ်ချက် (၂)ခုနဲ့ ကျင်းပပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က ရဟန္တာများကို ကယ်တင်ခြင်း ချမ်းသာ စံစားခွင့် ပေးတော်မူတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်း ထောပနာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ဒုက္ခအခက် အခဲနှောင့်ယှက်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ အားနည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ လောကီသားတွေကို ဇွဲမလျော့ဘဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့ ဆက်ပြီး ကြိုးစားကြဖို့အားပေး တိုက်တွန်းလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူတွေအတွက် ဒီလောကမှာ ဘ၀အခြေအနေ မတူညီပေမဲ့ နောင်ဘ၀မှာ ထာဝရသုခ ချမ်းသာစံစားရဖို့ ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံပေါလူးက ဘာသာတူများကို "သန့်ရှင်းသူ" တစ်နည်းအားဖြင့် ရဟန္တာလို့တင်စားပြီး ခေါ်ဝေါ် ထားပါတယ် (ရောမ ၁း၆၊ ပကော ၁း၂၊ ဒု-ကော ၁၃း၁၂)။ ဆေးကြောခြင်း မင်္ဂလာကို ခံယူပြီးတဲ့နောက် ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် နောင်ဘ၀မှာ ဘုရားသခင်ကို ဖူးမြင်ခွင့်ရကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ တပည့်တော်ကြီး သံယောဟန်ကဆိုပါတယ် (ပ-ယော ၃း၂)။ ယနေ့ခေတ်မှာ သွေးမြေကျအောင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေ မရှိသလောက်နည်း သွားတဲ့အတွက် ဓမ္မအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နှောက်ယှက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်မှ ရဟန္တာဘ၀ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရကြမှာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှတ်အသား ပါတဲ့သူတွေဟာ ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းက ကင်းလွတ်ကြပါတယ် (ဗျာဒိတ် ၇း ၃၊ ထွက် ၃၉း ၃၀၊ ယေဇကျေလ ၉း ၄)။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သိတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ခရူစူးအမှတ်အသားကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှာ ပေးမှာသေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကောင်းကင်ကနေ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီမဲ့သူတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှောက်ယှက်ခြင်းတွေ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တုိ့စိတ်ပျက် အားငယ်မသွားဘဲ ဘုရားသခင်နဲ့တကွ ရဟန္တာများကို ပိုမို ယုံကြည်အားကိုး ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် ရရှိမဲ့ ကောင်းကင်ဆုတွေကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ရှေ့တော်မှာအစဉ် ဖူးမျှော်ခွင့် (ဗျာ ဒိတ်၇း၁၅) နဲ့ အပြစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများမှ လွတ်ကင်းခြင်း (ဗျာဒိတ် ၇း၁၆)တို့ပါပဲ။ သစ်တစ်ပင်ကောင်းရင် ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်သလို တစ်ဦးတစ်ယောက် အောင်မြင်ထွန်းပေါက်ရင် လူပေါင်းများစွာကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမိအသင်းတော် ဆိုတဲ့ ခရစ်ယာန်မိသားစုကြီးမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကယ်တင်ခြင်း ချမ်းသာကို ရရှိထားကြပါပြီ။ ကောင်းကင်ဘုံက ရဟန္တာတွေက ကျွန်ုပ်တို့လို ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အကျိုးပြုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း ရဟန္တာများကို ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ကို အပ်ပါတယ်။ "ဘုရားသခင်က သူရဲ့ ကျေးဇူးမေတ္တာတွေကို ရဟန္တာတွေကနေ တဆင့် ပေးတော်မူတယ်၊ သူတို့တောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတော်တွေ ရတာမို့ မြင့်မြတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ အကူအညီကိုယူရမယ်"လို့ ရဟန္တာ သောမတ်စ် အကွိုင်းနက်စ်ကဆိုပါတယ်။ အပြစ် မပြုခဲ့ဖူးတဲ့ရဟန္တာ မရှိသလို မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေတဲ့ အပြစ်သား ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ နောင်တော် ရဟန္တာများက "စိတ်မပျက်ပါနဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း တချိန်က သင်တို့လို အပြစ်သားတွေပါပဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ မေတ္တာတော်ကြောင့် ဒီဘ၀ကိုရတာပါ။ ကြိုးစားတဲ့ သူတွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ထံမှာ ဆုတောင်းပေးနေတယ် ကောင်းကင်ဘုံမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ထာဝရဆုလဒ်ကို စံစားရမယ်"လို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ် ကြိုဆိုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဖက်က ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ဖတ်ရှုရုံမဟုတ်၊ လိုက်နာဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ သွန်သင်မှုကို နှစ်သက်ရုံမဟုတ်ဘဲ နာခံဖို့၊ ယုံကြည်ခြင်းကို ၀န်ခံရုံမက ကျင့်ကြံကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းကင်ရောက်ရာ နည်းလမ်းပါပဲ။" အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံ၍အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂါတ်ကာလ အစဉ်ရှိတော်မူသော ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏"ဟု နေ့ညမပြတ် ကြွေးကြော်(ဗျာဒိတ်၎း၈) ကြတဲ့ ရဟန္တာများနဲ့အတူ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းရင်း "ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငှါ ဆုတောင်းပေး တော်မူကြပါ" လို့ ရဟန္တာများထံမှာ တောင်းခံကြပါစို့။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:16 AM
မိသားစုတွင်း၌၊ လူမှုရေး၌၊ ပညာရေး၌ အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားကန့်သတ်၊ ဖိနှိပ်ထားခဲ့မှုကြောင့် ကုန်လွန်ခဲ့သောရာစု နှစ်တစ်လျှောက်တွင် မိမိတို့၏ ဥာဏ်ရည်၊ ဥာဏ်သွေး၊ ပင်ကိုယ်အရည်ချင်း၊ တီထွင် ကြံဆနိုင်စွမ်းများကို ဖေါ်ထုတ်ခွင့်၊ အသုံးပြု ခွင့်မရဘဲ တိမ်မြုပ်သောဘ၀နှင့်သာ နေထိုင်သွားခဲ့ကြရရှာသည့် ထက်မြက်သော အမျိုးသမီးပေါင်း မြောက်များစွာရှိခဲ့မည်မှာ အမှန်ဖြစ်၏။ မည်မျှ နှမြောဖွယ် ကောင်းလှပါသနည်း။ ကမ္ဘာမြေနှင့် လူသားအချင်းချင်းကို အကျိုးပြု အလှဆင်ရန် ဖန်ဆင်းရှင်က အပြည့်အ၀ ထည့်သွင်းပေးလိုက်သော အမျိုးသမီး အရည်အသွေးများ ဖုံးဖိထားခြင်း ခံနေရပါသည်။
အမျိုးသမီး(မ)ဆိုလျှင် တစ်ဆင့်ချ၊ နှိမ်လိုသော သဘောသည် လူမျိုးတိုင်းလိုလိုမှာ မသိမသာရော၊ သိသိသာသာပါ ရှိနေသည်။ တိုးတက်ခေတ်မီပါသည်ဟူသော လူ့အသိုင်းများ၌ပင် ထိုအစွဲ လက်ကျန်ကရှိချင် သေးပေ၏။
ရှေးယခင်က မိသားစု၌ သား၊ သမီးပညာပေးလျှင် သားယောက်ျားကို ဦးစားပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာပို သင်ရသော ယောက်ျားလေးများ အသိအမြင်ဗဟုသုတပိုကယ်ကြ၊ အမြင်ပိုကျယ်ကြသည်။ သို့နှင့်လူ့ဘောင်တွင် ပို၍ နေရာရကြသည်မှာ မဆန်းပေ။ ပညာအတတ်များပြားရကား ထင်ရှားသော စာဆိုတို့လည်း အမျိုးသား ပိုများလေရာ ထိုထိုသော (ကျား) စာဆိုတို့၏ အမျိုးသမီး(မ) အကြောင်း နှိမ်၍ ရေးသားကြသည့် အကြောင်းများသာ ဖတ်ရ၊ ကြားရဖန်များ၍လည်း အမျိုးသမီး(မ)တို့ မကောင်းဟူသော အယူအစွဲကို ပို၍ ခိုင်လာစေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သော အယူအစွဲကို(မ)တို့အား ချီးမွမ်းထားသည့် နည်းပါးလှသောအဆို၊ အမွှန်း စကားတို့က မချေဖျက်နိုင်၊ မလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးထုကြီး (ဘာသာ၊ လူမျိုးတိုင်းကိုယ်စား)ဖက်မှ ရပ်တည်ကာ အမျိုးသမီးမြှင့်တင်ရေး စာပေရေးသားသော စောမုံညင်း၊ ခင်မျိုးချစ်၊ ခင်ဆွေဦး စသည့် စာရေးဆရာမကြီးများ လင်းလက်လာခြင်းအတွက် အားရ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်၏။ အသင်းတော်ကြီး၏ စာပေပိုင်း၌မူ (မ၊ကျား)ခွဲခြားမှု သိပ်မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ နောက်ပိုင်း၌ အမျိုးသမီးများ ပညာတတ်လာ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၌ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ စသည့် အဖက်ဖက်၌ တရွေ့ရွေ့ ထိုးဖောက်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင် အမျိုးသမီး(မ)အား တစ်ဆင့်နိမ့်လူ တန်းစားအစွဲကို အပြီး မဖျောက်နိုင်သေးပါ။ ဘုရားရေး၊ ဘာသာရေးသည် မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက် ရှိခြင်းကြောင့် ဤကဏ္ဍ၌လည်း (မ) တို့ကို နေရာ ခွဲခြား မှတ်သားပြီးသား ဖြစ်နေပေသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌သာ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်၏ဟူသော အခြေခံ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် (မ၊ကျား) ခွဲခြားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်နေသည့်တိုင် မိမိတို့ ဒေသရိုးရာဓလေ့(အထူးသဖြင့် အရှေ့တိုင်း)များကြောင့် ခွဲခြားမှု လက်ကျန်များရှိနေဆဲ မကွယ်ပျောက်နိုင် သေးပါ။ မျက်မှောက်လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမျိုး၊ စီးပွားရေးဈေးကွက်မှ အစ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စွန့်စားရသည့် အလုပ်တာဝန်မျိုးအထိ အမျိုးသမီးများ နေရာယူလာကြပြီဖြစ်သော လက်ရှိ နည်းပညာခေတ်ပိုင်းတွင် တော့ (မ၊ကျား) ခွဲခြားမှုထက် မဖြစ်စေ၊ ကျားဖြစ်စေပညာနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပို၍ ဦးစားပေး ရွေးချယ်လာကြပြီဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆရပါသည်။ အမျိုးသမီးဆိုလျှင် ငြိမ်နေရမည်၊ ဆုတ်နေရမည်၊ ကျုံ့နေရမည်ဟူသော အလေးချိန်ကြီးကမူ တဖြည်းဖြည်းလျော့၍ လာနေပြီဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာစေရန် ခေတ်အဆက်ဆက်မှ အမျိုးသမီးများ အချိန်များစွာယူခဲ့ကြရ၊ ရုန်းကန်ခဲ့ကြရသည်ကိုမူ သမိုင်းက မငြင်းနိုင်ပေ။ ဤအချက်ကို တွေ့ရှိဟန်တူသော Luciano Vian က ဤသို့ တစ်ချက်ဖော်ထုတ်တင် ပြထားသည်။ "အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေး ရလာဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်အတော်များများ တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုသူတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်း၊ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ တန်း တူညီတူရပိုင်ခွင့်များနဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့် စတာတွေအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှည်လျားစွာ ရုန်းကန်မှုပြုပြီးမှပဲ အချို့ကိုရခဲ့ကြပြီး အချို့မရသေးပါ။ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ များမှာလည်း ထိုက်သင့်တဲ့အယူအဆများ ၀င်မလာသေး။ နောက်ထပ်ပြီး မိသားစုတွင်းဥပဒေ၊ ကျား-မတန်းတူညီဖြစ်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အခွင့်အရေးဒါတွေ တင်ပြ တောင်းဆိုနေကြဆဲပါပဲ။} ဤနေရာတွင် တိုက်ဆိုင်ပြီး အကြောင်းအရာတူသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ Weekly Eleven (၂၀၀၆-ဇွန်လ) သတင်းစာစောင် မှ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၏ "အမျိုးသမီးနဲ့ပညာရေး" ဟူသည့် အခန်းဆက် ဆောင်းပါးဖြစ်ကာ - ကမ္ဘာ့သမိုင်းစဉ်၊ မြန်မာ့သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်မှ မွှေနှောက်၍၄င်း၊ သူမ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အတွေ့အကြုံပေါ်မှီ၍ အမျိုးသမီးဘ၀နှင့် အချို့ထင်ရှားသော အမျိုးသမီးများကိုတင်ပြထားခြင်း - လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အစဉ်အလာ၊ ဓလေ့ထုံးစံ လောင်းရိပ်ကို အမျိုးသမီးများ တိုက်ရိုက်ခံစားရခြင်း - အမျိုးသမီး(မ) မြှင့်တင်ရေးတွင် ပညာရေးသည် အဓိကကျခြင်း - မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများကို သူတို့ အရည်အချင်းနှင့် ထိုက်တန်သော နေရာမှန်များသို့ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် ရောက်ကြသည်ကို မြင်လိုလှခြင်း စသဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ (စာစောင်ကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုလျှင် ပို၍ရှင်းလင်းပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။) ထို "အမျိုးသမီးနဲ့ ပညာရေး" ဆောင်းပါးမှ အနည်းငယ် ကောက်နှုတ်၍ အရင်းအတိုင်း ဖေါက်သည်ချရမည်ဆိုလျှင် "မိန်းမတစ်ဦးနေနေရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မိန်းမတွေကို ပိတ်ပင် ချုပ်ချယ်တားဆီးတဲ့ အစဉ်အလာတွေနဲ့ ဘောင်ခတ် လှောင်ပိတ်ထားရင် မိန်းမတွေ ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ မျိုးဆက်ကို ဖြည့်ပေးရုံမှအပ မယ်မယ်ရရ အခြားကောင်းကျိုး မပြုနိုင်ပါဘူး။ လူ့အလယ်မှာလည်း အဆင့်နိမ့်ဆင်းသွားမယ် .." "လောကကြီးက အမျိုးသမီးတွေ အတွက် တစ်ဖက်သတ် ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ။ အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်လိုအပင်ပန်းခံ၊ အနစ်နာခံပြီး မိသားစုအတွက်နဲ့ အများအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လုပ်အားတွေ ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း ဒါကိုဆုပေး ကျေးဇူးတင် စကားပြောဖို့နေနေသာသာ အသိမှတ်ပြုခြင်းတောင် မခံရပါဘူး.." "အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိန်းမတွေ တစ်ပန်းရှုံးနေတာဟာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ရှိလှပါတယ်။ လုပ်ငန်းမှာ မိန်းမတွေက ဘယ်လိုပဲ တော်တော်၊ တတ်တတ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားပါစေ၊ ရာထူးတက်ဖို့ရာ မှာတော့ ယောက်ျားတွေကို ဦးစားပေး နေကြတာပါပဲ.. အထက်ရောက်လေလေ မိန်းမဦးရေ နည်းလေလေဖြစ်လာတယ် .. ဘာ့ကြောင့်လဲ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘယ်မှာမဆို ကိုယ့်အစွမ်း ဘယ်လောက်ရှိရှိ နောက်လိုက်တွေ၊ ဒုတိယတန်းစားတွေ၊ အိမ်နိမ့်စံတွေလုပ်နေကြရတာ ..." "အခုခေတ် မျိုးဆက်သစ်အမျိုး သမီးကလေးတွေက စွန့်စားဝံ့တဲ့သတ္တိမှာ ရှေးကအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုတယ်ထင် ပါတယ်၊ အလွန်တက်ကြွပြီး ပညာလိုချင် စိတ်ရှိကြပါတယ်။ အနည်းနည်းအဖုံဖုံနဲ့ အဆင်မြင့်ပညာကိုရှာကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပညာရေးစနစ်ကတော့ အရေးကြီးပါတယ် ..." စသဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
-What is your image of God ? What is your Female image of God?
By Sr. Ann Shwe , (SJA) -Woman:aperson uniquely creative.
By (Luciano Cian) - In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002)
- Weekly Eleven news letter ( June,2006) tif0kdif;yef (SJA)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:15 AM
နွေရာသီရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ရွာလေးကနေ မြို့ကို ဈေးဝယ်ဖို့ သူငယ်ချင်း ကိုလှထွန်းနဲ့ စက်ဘီးစီးသွား ကြပါတယ်။ စက်ဘီးပေါ်မှာလည်း မြို့မှာရောင်းဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပီနံ အိတ်တစ်အိတ်စီ တင်ပြီး သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ရွာနဲ့ မြို့ဟာ (၁၂) မိုင် လောက်ဝေးတာကြောင့် မနက်စောစော (၆)နာရီလောက် ကတည်းက ရွာကနေ ထွက်လာကြရပါတယ်။ တောလမ်းဖြစ်လို့ တစ်နာရီခွဲ နင်းတာတောင် ခရီးသိပ်မပေါက် သေးပါ။ မနက် အစောကြီးဘာမှ မစားကြရသေး၊ လမ်းကလည်း ကြမ်းတော့ တော်တော်ကို ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။
ဒီလိုနဲ့ လမ်းခရီး တစ်နေရာ အရောက်မှာတော့ ၀န်အပြည့်တင်လာတဲ့ နွားလှည်းတစ်စီးဟာ တံတားကို မကျော်နိုင်ဘဲ ရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။ နွားလှည်းပေါ်မှာတော့ နွားလှည်းမောင်း တဲ့ လူရွယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး စီးလာကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာလူရွယ်က "အစ်ကိုတို့ ကျွန်တော့်လှည်းကို တဆိတ်လောက်ကူ တွန်းပေးကြပါဦး" လို့ အကူအညီတောင်းတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း စက်ဘီးတွေရပ်ပြီး အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ နွားတွေကလည်း ရုန်းရလွန်းလို့ မောပမ်းနေတာကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော်က "ကဲ ကိုလှထွန်းရေ ကျွန်တော်တို့ ခဏလောက် တွန်းပေးကြရအောင်" ဆိုပြီး လှည်းကို ကူတွန်းပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှည်းပေါ်က ပစ္စည်းများလွန်းတာရယ်၊ တံတားက မြင့်လွန်းတာရယ်ကြောင့် လှည်းကတော်တော်နဲ့ မရုန်းနိုင်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း စောစောက စက်ဘီးနှင်းလာခဲ့လို့ မောနေပေမယ့် ကူညီလက်စနဲ့ ကူညီရအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော်က "ကဲ...ကိုလှထွန်း ရှိတဲ့ အားကုန်သုံးပြီး တစ်ခေါက်လောက် တွန်းကြရအောင်" ဆိုပြီး လှည်းကို တွန်းကြပြန်ပါတယ်။ နွား တွေကလည်း ရုန်း ကျွန်တော်တို့ကလည်း အားကုန်တွန်းနဲ့ပဲ နွားလှည်းဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တံတားကို ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါ တော့တယ်။
နွားလှည်းကျော်ဖြတ် အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို လူရွယ်နဲ့ အမျိုးသမီးက "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ စကားလေးများ ပြောမလားဆိုပြီး သူတို့ကို ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးစကား ပြောဖို့မဆိုနဲ့ လှည့်တောင် မကြည့်တော့ဘဲ သူတို့လှည်း ကိုဒုန်းစိုင်း မောင်းသွားကြပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ အတော်ကြီးကို မကျေမနပ်ဖြစ်သွားပြီး "ဒီနေရာမှာ ငါတို့သာ မကူညီဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမှ ကူညီမဲ့သူမရှိဘူးကွ။ ဟင်း... လှည်း ဒီလောက်တွန်း ပေးတာကို ကျေးဇူးတင် စကားလေးတောင်မှ ပြောမသွားကြဘူး။ တော်တော် ကျေးဇူးကန်းတဲ့သူတွေပဲ၊ စားပြီး ခွက်မှောက်ဆိုတာ ဒီလို လူစားတွေ ပဲပေါ့" လို့ ပြောဆိုနေမိကြပါတယ်။
ဒီအချိန် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အတွေးတစ်ခု ၀င်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်လည်း အခက်အခဲတွေကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ မေ့ကောင်း မေ့ပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ကိုလှထွန်းကို ဖျောင်းဖျ ပြောဆိုပြီး မြို့ဘက်ကို ခရီးဆက် ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒုက္ခအခက်ခဲများနဲ့ ကြုံရတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က အများကြီး ကူညီတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာကော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်မိရဲ့လား။??? မိမိတို့ ကူညီလိုက်တဲ့ သူက ကျေးဇူးမတင်ရင် သူတို့ကို အပြစ်မမြင် သင့်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားများအပေါ်မှာ အမြဲပဲကူညီ စောင့်ရှောက်နေတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့် မိမိတို့ ရရှိကြတဲ့ ကျေးဇူးတော်များအတွက် နွားလှည်းမောင်းသူ လူရွယ်နဲ့ အမျိုးသမီးလို ကျေးဇူးတင်ဖို့ မေ့တတ်တဲ့ သူတွေထဲ မပါစေဘဲ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ရရှိခံစားရတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်အတွက် ကျေးဇူးဆပ်တင်ရန် မမေ့ လျော့တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါစို့လို့ ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဝေမျှ၊ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ အပေါ် ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
၀ီလျံ သန်းဖေလေး (သစ်တော)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:50 AM
လူဟာ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းစားဖို့ ငွေကို ကြိုးစားရှာကြရင်းက ကိုယ်ဘ၀လေး ဆိုးဖို့ ဖြစ်လာကြတယ်။ လူက ငွေကိုမထိန်း သိမ်းနိုင်ခင် ငွေကပဲလူကို ထိန်းကျောင်း လာတယ်။ လူက ငွေကို ဦးမဆောင်နိုင်ဘဲ ငွေက လူကို ခိုင်းစေလာတယ်။ လူရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာလည်း ငွေအကြောင်းတွေပဲ ၀င်ပြီး နှောက်ယှက်နေတယ်။ လူရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာလည်း ငွေက ၀င်ရောက်နေရာ ယူထားလို့ ဓမ္မတရားတော်၊ မေတ္တာကရုဏာစိတ်၊ သနားကြင်နာစိတ်၊ အကောင်းမြင်ဝါဒတွေဟာ ရှောင်ဖယ် ထွက်သွားကြရတယ်။ ဘုရားသခင်နဲ့ လူဆက်သွယ်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ကြိုးကို ငွေသံလျက်က ဖြတ်တောက်ပစ်တယ်။ လူတွေ သိထားသင့်တာ ကတော့ မိမိကောင်းစားရေးအတွက် ငွေရဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုရှိခြင်းဟာ အရေးကြီးဆုံး သော့ချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပါ။
မြို့တွေမှာ မနက်မိုးသောက်ကနေ ညနေ၀င်မိုးချုပ်အထိ ထမင်းဗူး၊ ထမင်းချိုင့် အမျိုးမျိုးကိုင်၊ လွယ်အိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ သွားနေကြတဲ့ လူတွေ၊ လမ်းမကြီးမှာ ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ။ အားလုံးသော လူတွေဟာ သူ့ နည်းသူ့ဟန်နဲ့၊ သူ့အဆင့်အတန်း၊ သူ့ဝတ်စုံအရောင်နဲ့ သူ့လူတန်းစားအလိုက် ငွေရှာနေကြတယ်။ နယ်များရှိ ရွှေမှော်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာမှော်များမှာလည်း မိုးသောက်မှ မိုးချုပ်တိုင်ကျင်းသူ၊ ကျင်းသားများ မရပ်မနား ကျင်းဂူအောက်ထဲမှာ ဂေါ်ပြား၊ ပေါက်တူး၊ တူရွင်းကိုင်ကာ ရွှေကျင်နေကြ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်နေ ကြတယ်။ သူတို့တွေ ဘာလုပ်ကြတာလဲ။ ငွေရှာနေကြတာပဲ။
ဆရာဝန်ဘွဲ့ ရထားသူတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်စွာ ပြုလုပ်သူတွေလည်း ငွေရှာနေကြတယ်။ သူတို့တွေ ငွေအကြောင်း၊ ငွေရှာနည်း အကြောင်းတွေ မသင်ကြားခဲ့ရဘဲ ဘာကြောင့်ငွေနဲ့ လုံးပန်း နေရတာလဲ။ ကျွဲ၊ နွားကျောင်းသားတွေလည်း သူ့နည်းသူဟန်နဲ့ ငွေရချင်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဘာသာရေး အမှုဆောင်သူတွေလည်း ငွေလမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ မျောပါနေကြရတယ် ဘာအခက် အခဲကြောင့်လဲ။
တက္ကသိုလ်မှာ လေးငါးနှစ်တက်ကြပေမဲ့ ငွေအကြောင်း ဘယ်ကျောင်းမှာမှ မသင်ယူကြရ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ အခါ ငွေရှာကြရတော့တယ်။ မျက်မမြင်တွေ၊ တောင်းရမ်းစားသူတွေလည်း ငွေလိုချင်ကြတယ် ငွေရှာကြတယ်။
တချို့လူတွေဟာ ဘုရားကျောင်း တက်နေချိန်၊ မစ္ဆားတရား ပါဝင်နေချိန်၊ ကိုယ်တော်မြတ်ဖူးဆောင်မှာ ကိုယ်တော် မြတ်ဖူးနေချိန်၊ စိပ်ပုတီးစိပ်နေချိန် သူတို့ အိတ်ထဲက (သို့)ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ Hand Phone လေးက အသံကျယ်စွာ အော်မြည်လာတဲ့အခါ ချက်ချင်း အပြင်ကိုထွက်သွားပြီး ဖုန်းပြန်ပြောတယ်။ ဘာအကြောင်းတွေ ပြောကြသလဲဆိုတော့ ငွေရှာဖို့၊ ငွေရဖို့ အကြောင်းတွေများပါတယ်။ ငွေအကြောင်းပြောဖို့ ဘုရားဆီက အာရုံက ငွေဆီကို ရောက်သွားတယ်။ ဘာကြောင့် ချမ်းသာသူတွေ ပိုပြီး ချမ်းသာချင်ကြတာလဲ။ ဘာကြောင့် ငွေကို ဒီလောက်ကျား ကုတ်ကျားခဲ ရှာနေကြတာလဲ။
လွန်ခဲ့သော နွေရာသီ ညတစ်ညမှောင် ရီပျိုးစချိန်မှာ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဆရာတော်များ ကျောင်းတိုက် CBCM ကျောင်းတော်ကြီး အ၀င်ပေါက် ဂိတ်ရှေ့မှာရပ်ပြီး ပြည်လမ်းမပေါ် ပြေးလွှားနေတဲ့ ကားတွေ၊ ပလက်ဖောင်းဟိုဘက် ဒီဘက်မှာလမ်းလျှောက် သွားနေတဲ့ လူတွေကို ကြည့်နေချိန် ရှပ်အင်္ကျီ အဖြူလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်နက်ပြာရောင်နဲ့ ထမင်းချိုင့် ကလေးကိုင်၊ လွယ်အိတ်လေး လွယ်ထားပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့ နားက ဖြတ်သွားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ယောက်ကို "ညီလေး ဘယ်က ပြန်လာတာလဲ" လို့ စပ်စုပြီး မေးလိုက်ပါတယ်။ သူက "ကျွန်တော်ဆိုင်ကပြန်လာတာပါ" "အော် ..ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တာလား" "ဟုတ် ပါတယ်" "ဘာဆိုင်လဲ"လို့ ထပ်မေးတော့ "ဘီယာဆိုင်ပါ" တဲ့ "ဟုတ်လား၊ တစ်လ ဘယ်လောက်ရလဲ" ဒီမေးခွန်းကို သူဖြေဖို့အနည်းငယ်ကြာ စဉ်းစားပြီးမှ "မပြော စလောက်လေးပါ" ဆိုပြီး တိတိကျကျပြော မသွားပါ။ နောက်ဆုံး သူပြောခဲ့တာက "ရတဲ့ငွေဟာ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်ပါပဲ၊ အိမ်ရှေ့က ၀င်ရင် အိမ်နောက်က ထွက်၊ နောက်က ၀င်ရင် ရှေ့ကထွက် သွားတာပါပဲ၊ မြဲနေတာကို မရှိပါဘူး" လို့ ပြောပြီး စိတ်ပျက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ထွက်သွားပါတယ်။
ငွေဟာ တန်ခိုးအာဏာရဲ့ ပုံစံ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ လူတွေကို ခိုင်းတယ်။ လူတွေဟာ ငွေရဲ့ ကျွန်ဘ၀ကို ရောက်လာကြတယ်။ ဘ၀ဆိုတာဟာ ဘာသာစုံကို တစ်ဦးထဲ သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာကြီးပါပဲ။ တစ်ချို့က ဘ၀ကိုငွေကြောင့် အရှုံးပေး လိုက်ကြတယ်၊ တစ်ချို့က ပြန်ပြီး တိုက်ကြတယ်။ လူအနည်းငယ်သာ ဘ၀ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ ရှေ့ဆက် ချီတက်နိုင်ကြတယ်။ သေချာ လေ့လာကြည့်ရင် ဆင်းရဲသားတွေ၊ လူလတ်တန်းစားတွေဟာ ငွေအတွက် အလုပ်ကို ကြိုးစားနေကြတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေကတော့ ငွေကို သူတို့ အတွက် အလုပ်လုပ်ခိုင်းကြတယ်။
လူတွေဟာ အကောင်းဆုံး ပညာတွေ တတ်မြောက်အောင် သင်ယူခဲ့ကြတယ်။ သင်ယူခဲ့တဲ့ ပညာတွေ အများကြီးပါ၊ သင်ယူ စရာတွေလည်း အများကြီးပါ၊ ဒါပေမဲ့ ငွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမယ် ဘယ်လိုခိုင်းစား ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ လောကနယ်မှာ သင်ရပါအုံးမယ်။ မိမိ လက်တွင်းရလာတဲ့ ငွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမယ်၊ ဘယ်လောက် ကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး တိုးပွါးအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့အဖြုန်းကို ခွဲခြားသိဖို့က အရေးကြီးဆုံး အချက် ဖြစ်တယ်။ ငွေဟာ လူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ဘ၀အဆင်ပြေစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လောဘကြီးဖို့၊ မောဟကြီးဖို့ မဟုတ်ပါ၊ ငွေကြောင့် လူတွေကို ပျက်စီးရန်လည်း မဖြစ်သင့်ပါ။ ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဦးထိပ်ထားပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြု စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ ငွေအပါအ၀င် ကြီးစွာ အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာများကို ဖယ်ထားပြီး ဘုရားသခင်ထံမှာ ရင်ဖွင့်ပါ။ ဘုရားကို အာရုံပြုနေချိန်ထိ အနှောင့် အယှက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် သင်ရဖို့ ကြိုးစားတဲ့ငွေဟာ စာတန် ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအခါ ဘုရားသခင်နဲ့အတူ ရှိနေရာကနေ ဆွဲထုတ်နေပြီဆိုတာ သတိရှိဖို့ သင့်ပါတယ်။ သင်ငွေရှာနေတဲ့အချိန် သင့်လက်ထဲသို့ ငွေရောက်လာတာနဲ့ ဘုရားသခင်ထံ သင့်ရဲ့ငွေကို အပ်နှံထားပါ။ သခင်ဘုရား ယခု ကျွန်ုပ်လက်ထဲရောက်လာသော ငွေကို ကိုယ်တော့်လက်ထဲ အပ်နှံထားပါတယ်၊ မှန်ကန်စွာ သုံးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပါလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီလို အချိန်မီ ဘုရားသခင်ထံ မအပ်နှံလို့ စာတန်က ဦးပြီးအုပ်စိုး သွားရင်တော့ သင့်ရဲ့ ငွေဟာအကျိုးမရှိ၊ လျှင်မြန်စွာ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် (သို့) အကျိုးမဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးစွဲမိပါလိမ့်မယ်။
၀င်ငွေရဖို့ ကြိုးစားနေသူ ဘယ်သူမဆို လူသားအားလုံး ဘုရားသခင်ထံမှာ အရာရာကို အမြဲ အပ်နှံပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်စွာနဲ့ ကြိုးစား ရုန်းကန် လှုပ်ရှားသွားမယ် ဆိုရင် ပျက်စီးပြိုလဲ မသွားဘဲ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပန်းတိုင်ရောက်ပြီး ရှေ့ဆက်ကာ ဆက်ကာ အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း စဉ်းစားမိသမျှ တင်ပြလိုက် ရပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:08 AM
မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်း
မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်းတို့ ဆိုတာတွေကို ယခုခေတ် လူတွေ သိပ်မပြော ကြတော့ဘူး။ ကိုယ်ကျိုး အတ္တအကျိုးစီးပွားနဲ့ သာယာမှုနောက်ကိုသာ လိုက်လျှောက် နေကြပါတယ်။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် ကာလမှာ လူ့အချစ်ကို ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ၊ ၀တ္ထု စာအုပ်တွေ၊ ခေတ်ပေါ် သီချင်းတွေထဲမှာလို အာရုံခံစားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသော အရာ၊ သာယာမှုနဲ့သာ ယူဆ လက်ခံကြပါ တော့တယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဆိုတာကို အတ္တမဆန်သော နည်းလမ်းနဲ့ သူတစ်ပါးကို အစေခံခြင်းအားဖြင့်သာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အတွေး အခေါ်ကတော့ ယခုခေတ် ကာလလူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဆက်စပ်၍ မရပါ။ ပြဒါး တစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်းဖြစ်၍ နေပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ရာစု နောက်ပိုင်းစာပေနဲ့ မီဒီယာ လောကတွေမှာလည်း အကြမ်းဖက်မှု၊ အဓမ္မပြုမှုတွေနဲ့ ပျော်သလိုသာနေ ကိုယ့်လူရေ ဆိုတဲ့ အတွေး အခေါ်တွေသာ တိုးတက် လာနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ်တွေ များသောအားဖြင့် ခံယူချက်လွဲနေတဲ့ အချက်ကတော့ "ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကို စစ်မှန်သော အရာလို့ မတွေးခြင်း" ပဲဖြစ်တယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုသောအရာကို ရှာဖွေရတာ မခက်ခဲလှပါဘူး။ တစ်ပါးသူရဲ့ အခက်အခဲကို ၀င်ရောက် ကူညီပေးခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြသခြင်းဖြင့် ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အစေခံလာလေလေ လူပီသလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ မာသာရ်ထရေဇားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ အလွန် လိုအပ်နေပါတယ်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့် ပြီးချည့်နဲ့နေတဲ့ သီလရှင်မာသာရ်ထရေဇားဟာ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး ချစ်ခြင်းနဲ့ အစေခံခဲ့တယ်။ လူ့ဘ၀ ချစ်ခြင်းရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သူမရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ လောကရဲ့အပေါ်ယံမျှသာ ဖြစ်တဲ့ တန်ဖိုးတွေကို သူမဟာ အဆက်မပြတ် စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းဟာ ဘာသာတရားမရှိတဲ့ သူကိုပင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မာသာရ်ထရေးဇားကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ လူတော်တော် များများဟာ ချစ်ခင်၊ ရိုသေ လေးစားကြပါတယ်။
သူမရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့အကျင့် အားဖြင့် နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့ Umanism ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားမရှိပဲနဲ့လည်း ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပြည့်စုံခြင်းကို ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူသား ပဓာန၀ါဒီများနဲ့၊ ရုပ်ဝါဒီသမားတွေရဲ့ အရိုးစွဲနေပြီး ဖြစ်တဲ့ ယူဆချက် အချို့ကို မှားယွင်းခြင်း အကြောင်းပြဆို နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ လူဦးရေထူထပ် သိပ်သည်းမှုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေ၊ သေအံ့ဆဲဆဲ လူနာတွေကို စွန့်ပစ် ထားကြတယ်။ သူတို့ကို စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးကနေ ထွက်ခွာမသွားမှီ နောက်ဆုံအချိန်လေးမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေ ခံစားသွားနိုင်ဖို့ သူမနဲ့ သီလရှင်တွေက ဒုက္ခခံပြီး သယ်ယူကြ နှစ်သိမ့်ပေးကြ ပါတယ်။ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေ ရသူကို ညင်ညင်သာသာ အသက်ထွက်စေပြီး သူတို့ရဲ့ ကြင်နာသနားခြင်းကိုပြတဲ့ သူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မာသာရ်ထရေးဇားရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ လွန်အံ့သြစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
မာသာရ်ထရေးဇားရဲ့ စကားကို နားထောင်ကြည့်ရင် သူမရဲ့ စကားတွေထဲမှာ ကြီးမားတဲ့ စိတ်ခွန်အားနဲ့ ၀ိညာဉ်ရေး အလှတရားတွေ ပါရှိနေပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဆာမွတ်တဲ့သူများ၊ ဖျားနာနေသောသူ၊ အ၀တ်မရှိသောသူ၊ အိုးအိမ်မရှိသောသူတွေနဲ့ ထပ်တူပြုထား ပါတယ်။ ဆာမွတ်ခြင်းလို့ ဆိုရာမှာ အစားအသောက် တင်မကပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကြင်နာဖေးမမှုကို လိုအပ်လို့ အားငယ်နေခြင်း တွေပါပါတယ်။ အ၀တ်မရှိခြင်းလို့ဆို ရာမှာ အင်္ကျီ၊ လုံချည်တွေသာ မဟုတ်ပဲ လူတွေက သနားကရုဏာ မရခြင်း၊ မသိ ကျိုးကျွံပြုခံရခြင်းတွေပါ ပါတယ်။ အိုးအိမ် မရှိခြင်းဆိုရာမှာ သစ်၊ ၀ါး၊ အုတ်နဲ့ဆောက် ထားတဲ့ အိမ်တွေကိုသာ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပဲ မိမိရဲ့အပေါ်၊ မိမိကို ဖေးမပေးသူအဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲ အားကိုးရာ မဲ့ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာလည်း မမှန်ကန်နေတဲ့ အချစ်ဆိုရင် နာကျည်းခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ခရစ်တော်ဟာ လူသားတွေကို ချစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကားတိုင်တော်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိက တစ်ပါးသူကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ပေးဆပ်ခြင်း ဆိုတာရှိကို ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းဟာ ဘ၀မှာ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေနေ ကြပါတယ်။ သူတို့ဘ၀ အတွက် ပင်ကိုရည် ရွယ်ချက်နဲ့ တန်ဖိုးကို ပေးမဲ့ အရာကို ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ (Albert Einstein) က အခုလိုဆိုထားပါတယ် မိမိဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ ဟာဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှုကို မရရှိရုံသာမကပဲ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ပင် မဖြစ်နိုင်လောက် အောင်ပါပဲတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘ၀မှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူးဆိုရင် အသက်ရှင်နေရတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ပါဘူး။ အကယ်၍ မိမိဘ၀မှာ အဓိပ္ပါယ် တစ်စုံတစ်ရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရင် ကြီးကျယ်တဲ့ ဒုက္ခ ဝေဒနာတွေကိုတောင် ခံနိုင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် လူပီသဖို့ဆိုရင် မိမိအလိုဆန္ဒကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခြင်းများကို မလွဲမသွေ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စာရိတ္တဗလကို တိုးတက်ချင်ရင်တော့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ် ခြင်း (Self-control) .. က အလွန်အရေးကြီး ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးသူငယ်များကို အတ္တမဆန်တတ်ရန်နှင့် ရက်ရောတတ်ရန် အမြဲသွန်သင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် အသင်းတော်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ၀ါတွင်းကာလဆိုတာကို သတ်မှတ် ပေးထားပါတယ်။ တသီးတခြား ၀ါရှောင်၊ အသားရှောင်ရတဲ့နေ့တွေဟာ အလွန်အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီလို ခြိုးခြံခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့အသွေးအသား ဆန္ဒ သဘာဝအ လျှောက်ပြုမှုလိုစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ပိုမို မြင့်မြတ်တဲ့ သဘာဝသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အရာ အားလုံးကို မိမိအတွက် ရယူနေမယ် မိမိရဲ့ စိတ်အလိုဆန္ဒကို လိုက်ဖြည့်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ၀ိညာဉ်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာပါ ရင့်ကျက်မှု မရှိမှာ သေချာနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သာလွန် မြင့်မြတ်တဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တမဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ နီးစပ်သောသူများကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြသရပါမယ်။ မိမိ၏အလိုကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် လူ့ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ သဘောပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်နိုင်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားရန် အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘ၀မှာလည်း မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမြတ်သော ဘ၀အသက်တာကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန် ကောင်းတောင်းရင်း ဒီနေရာမှာဘဲ ရပ်နား ပါရစေလား။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:20 AM
ခရစ္စမတ် ည..ကျမ်းစာ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ သုခမိန်ကြီး ရဟန္တာသံ ဂျေရုမ်းဟာ သူငယ်တော် မွေးဖွားသော ဘုရားကျောင်းကြီးထဲက သူငယ်တော်ဂူလှိုင်နားမှာ ဆုတောင်းတုန်း သူငယ်တော်လေး ထင်ရှားပြတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အလင်းရောင်များတောက်ပလျက်ရှိနေတယ်။
"ဂျေရုမ်း သင် ငါ့ရဲ့မွေးနေ့ ဘာပေးမလဲ?"
"သူငယ်တော်ဘုရား တပည့်တော်ရဲ့ နှလုံးသားကို ပေးဆက်ပါ့မယ်။"
"တပည့်တော်ဆီမှာ ရှိသမျှတပည့်တော်ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုပေးပါ့မယ်"
"ကိုယ်တော်ဘုရား.. တပည့်တော်ဆီ နောက်ထပ် ဘာမျှ မရှိတော့ပါဘူး ဘာလိုချင် သေးပါသလဲ"
"ဒါတွေနဲ့ ကိုယ်တော် ဘာလုပ်မှာလဲ.."
"သင့်အပြစ်များ အားလုံးကို အခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဖို့ ငါ့ကိုပေးပါ.."
"ခရစ်တော် ယေဇူးလေး တပည့်တော် ငိုချင်တယ်" ဆိုပြီး သံဂျေရုမ်းဟာ ၀မ်းသာအားရလွန်း၍ ခရစ်တော် ယေဇူး သူငယ်တော်လေးအား ပြည့်ဝသော ချစ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်လျက် ငိုရှိုက် လိုက်တယ်။
ရှင်းရှင်းလေးပါဘဲ.. ခရစ်တော်ကို ၀မ်းမြောက် ကြည်နူးစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးစီ ကိုယ့်အပြစ်အမှားများအတွက် ၀မ်းနည်းတောင်းပန် အာပတ်ဖြေခြင်းနဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူစင်သော နှလုံးသစ်နဲ့ ကိုယ်တော်၏ စားပွဲတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြပါစို့...
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:32 PM